नेपालमा गाँजा बहस, प्रतिबन्ध फुकुवा होला त ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » नेपालमा गाँजा बहस, प्रतिबन्ध फुकुवा होला त ?
नेपालमा गाँजा बहस, प्रतिबन्ध फुकुवा होला त ?
काठमाडौं । गाँजामा लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन नेपालको संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएपछि सुरु भएको बहसले अब भने नयाँ मोड लिने भएको छ । केही हप्ताअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ’हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि नेपालमा गाँजा बहसले नयाँ मोड लिएको हो ।
संसदमा बिचाराधिन प्रस्वाले समेत विघठित संसद पुनःस्थापनापछि नयाँ शिराबाट बहस सुरु हुने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङ त राष्ट्रसङ्घीय बैठकमा नेपालले पनि गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्नुपर्ने पक्षमा नै मतदान गरेकाले अब प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । सांसद तामाङ गाँजामाथीको प्रतिबन्ध हटाएर सुरक्षा बन्दोबस्तीसहित नेपाली जनताको आयस्तर उकास्नेगरि गाँजा खेती थाल्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भने गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे थप सङ्गठित अपराध बढ्ने बताउँछन् । प्रतिबन्ध फुकुका गरेर गाँजा उत्पादन र उत्पादित गाँजाको ओसारपसारमा सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने गलत प्रयोग र गाँजा लुटपाट लगायतका संगठित अपराध बढ्नसक्ने पूर्वप्रहरी अधिकृत मल्लको धारणा छ । हुन त, विक्रम सम्वद २०३३\_०३४ अघिसम्म नेपालमा गाँजामाथी कुनै प्रतिबन्ध नभएकाले खुला रुपमा खेती र बेचबिखन हुँदै आएको थियो ।
विश्वका करिब ६० देशले गाँजलाई आंशिक वा पूर्ण रुपमा खुला गरिसकेका छन् । गाँजामाथीको प्रतिबन्द हटाएर सरकारले आवश्यक सुरक्षाको बन्दोबस्ती गर्ने हो भने वार्षिक २५, ३० लाख कमाउन कुनै पनि परिवार बैदेसिक रोजगारी खोज्दै विदेश भौतारिन नपर्ने कतिपयको धारणा रहँदै आएको छ । गाँजामाथीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा काठमाडौ महानगरका पूर्व मेयर केशब स्थापितले माग गर्दै बहस समेत चलाउँदै आएका छन् ।